August 3, 2021 - Babal Khabar
काठमाडौं साउन १९ । नेपालीको एउटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियामा पछिल्लो समयमा कोभिड-१९ (कोरोना) का संक्रमितको संख्या निरन्तर उकालो लागेको छ । मलेसियाले खोप अभियानलाई तिव्रता दिइरहेको समयमा संक्रमितको संख्या पनि दैनिक उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । कोभिड-१९ का संक्रमितहरुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने अनलाइन वल्र्डओमिटरका अनुसार पछिल्ला केहि दिनयता मलेसियामा दैनिक १५ हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला परिरहेका छन् । मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमवार मलेसियामा १५ हजार ७ सय ६४ जना नयाँ संक्रमित फेला परेको जनाएको छ । आइतवार भनें १७ हजार १ सय ५० जना संक्रमित मलेसियामा फेला परेका थिए । शनिवार १७ हजार ७ सय ८६ जना संक्रमित फेला परेका थिए । मलेसियामा हालसम्म ११ लाख ४६ हजार व्यक्तिलाई कोभिडको संक्रमण भइसकेको छ । त्यसमध्ये ९ लाख ३७ हजारको हाराहारी भनें निको भइसकेका छन् । संक्रमित फेला पर्ने क्रम
जब गर्भमा बच्चा रहन्छ, तब गर्भवती शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ्य हुनुपर्छ । यसले गर्भको बच्चामा सोझो प्रभाव पार्छ । यदि आफ्नो बच्चाको मानसिक र शारीरिक विकास समुचित ढंगले होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, गर्भवतीको ख्याल राख्नैपर्छ । गर्भवतीलाई प्रफुल्ल तुल्याउनुपर्छ । उनीहरु सकारात्मक, खुसी, सुखी भए गर्भको बच्चामा त्यसको प्रभाव पर्छ । यद्यपी गर्भवती आफुले मात्र चाहेर सबै कुराको ख्याल राख्न सक्दैनन् । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोगीको रुपमा पतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पतिले त्यस्ता कुनैपनि काम गर्नु हुँदैन, जसले गर्भवती पत्नीमा चिन्ता थप्छ । १. सहायक बन्नुहोस् : गर्भावस्थामा महिलामा हुने समस्या, कमजोरी आदिलाई पतिले पनि अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । गर्भवती पत्नी के कस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् भन्ने कुरा मनन गरेर त्यही अनुसार सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्छ । पत्नीको आत्माविश्वास बढाउने, खुसी रा
जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् । तर, एउटा जमात यस्ता पनि छन्, जो दाम्पत्यलाई बन्धन ठान्छन् र त्यसबाट उन्मुक्त जीवन विताउन राजी हुन्छन् । विवाह गर्नैपर्छ भन्नेमा सबैको राय मिल्छ भन्ने छैन । कतिपय यस्ता हुन्छन्, जो विवाहलाई अनिवार्य ठान्दैनन् । उनीहरु विवाह नगरी एक्लो जीवन विताउनमै कल्याण मान्छन् । अहिले त केसम्म हुन्छ भने, कुनै पुरुष वा महिलाबाट सन्तान जन्माउने र अविवाहित आमा वा बुवाको रुपमा जीवन विताउने । विवाह गर्नैपर्छ त ? : हुन त विवाह हाम्रो परम्परा हो । संस्कृति हो । प्रकृतिले पनि दुई विपरित लिंगीको समायोजनलाई स्विकारेको छ । सृष्टि निरन्तरताको लागि पुरुष र महिलावीच संसर्ग हुनैपर्छ । उनीहरु शारीरिक रुपमा एक हुनैपर्छ । प्रकृतिको यो नियमले पनि पुरुष र महिलालाई अलग-अलग राख्दैन । उनीहरुक
खाना पकाउने कला : यसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन जान्नुहोस्
शरीर स्वास्थ्यको लागि तेलको उपभोग राम्रो मानिन्छ । त्यसैले जुनसुकै परिकार बनाउँदा पनि तेल चाहिन्छ भने सबैभन्दा पहिले यसको गुणस्तरबारे ध्यान दिनुपर्छ । स्वस्थ खानाको लागि बाहिरभन्दा घरमा नै खाना बनाउनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाना पकाउने विधि नजान्दा पनि खानामा रहेको पौष्टिक तत्व नष्ट हुने गर्छ । वास्तवमा नेपाली भान्सामा विभिन्न पौष्टिक आहार पाकिरहेको हुन्छ । दाल र तरकारीमा एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइबर, प्रोटिन र अन्य आवश्यक भिटामिन र खनिज पदार्थ पाइन्छ । त्यस्तै, अरू खानेकुरामा अरू पौष्टिक आहार हुन्छ । यदि त्यस्ता खानेकुरा लामो समयसम्म उच्च तापक्रममा पकाइन्छ भने त्यसभित्र रहेको पोषक तत्वहरु हराउन जान्छ । यस कारणले गर्दा खाना त्यति स्वस्थ रहँदैन जति यो पहिले बनाइएको बेलामा हुन्थ्यो । अर्कोतिर, जब तपाईं खुर्सानी, पत्तेदार साग, ब्रोकोली, आदि धेरै पकाउनुहुन्छ वा उच्च गर्मीमा राख्नुहुन्छ भन
कसरी हामी बुढो हुन्छौं ? यस्तो पत्तौनै गाह्रो कारणले छिटै बुढो हुन्छौं
मान्छेलाई बुढ्यौलीसँग डर लाग्छ । जब–जब शरीर बुढ्यौलीतर्फ धकेलिदै जान्छ, शरीरका अंगहरु शिथिल हुँदै जान्छन् । यसले उर्जा र उत्साह पनि घटाउँछ । अनेक रोगहरुले च्याप्न थाल्छ । त्यसैले मान्छे सधै जवान बन्न चाहन्छ । तर, बुढ्यौली एक शारीरिक प्रक्रिया हो । जन्म र मृत्यु जसरी निश्चित छ, उसैगरी बुढ्यौली पनि । आजको बालक भोलि बुढ्यौलीबाट गुज्रिनै पर्छ । यद्यपि कोही चाडै बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्छन्, कोही ६५–७० बर्षसम्म पनि जवान दिन्छन् । आखिर के कारणले हामी चाडै बुढो हुन्छौं ? विज्ञहरु भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो वंशानुगत गुण र जीवनशैली जिम्मेवार छ ।’ डिएनएको क्षति हाम्रो डिएनए एक किसिमको जेनेटिक कोड हो जुन कोषको बीच सञ्चारित हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा यो जेनेटिक कोडको संरचनामा गडबड हुन सुरु हुन्छ । विस्तारै विस्तारै यो कोषमा जम्मा हुन सुरु हुन्छ । यो प्रक्रियालाई आनुवांशिक अस्थिरताको रुपमा मानि
हिरासतमा मृत्यु प्रकरणले : ड्युटीमा खटिएका जवान निलम्बित, डीएसपी प्रदेश कार्यालय तानिए
१९ साउन, जनकपुरधाम । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासत कक्षमा थुनुवा मृत फेला परेको घटनामा एक प्रहरी जवानलाई निलम्बन गरिएको छ । यस्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)लाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय तानिएको छ । लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–२ का ४२ वर्षीय बिलटु रविदास गत शुक्रबार हिरासत कक्षको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । उक्त घटनामा जिल्ला प्रहरी धनुषाका डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय तानिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी उमेश रञ्जितकारले जानकारी दिए । यस्तै हिरासत कक्षमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जवानलाई भने निलम्बन गरिएको उनले बताए । घटनाको छानविनका लागि डीएसपीलाई प्रदेश प्रहरी तानेर जवानलाई निलम्बन गरिएको उनले बताए । दाजुभाइको विवादमा ज्यान मार्ने तथा अंगभंग मुद्दामा पक्राउ परेका रविदासलाई जिल्ला अदालतले २ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, धरौटी
काठमाडौं । उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाइसहित लम्ब्याउने तयारी भएको छ । सोमबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को बैठकले उपत्यकामा खुकुलो निषेधाज्ञासँगै कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि थप कडाइका साथ निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कालिप्रसाद पराजुलीले कोरोना संक्रमण फैलिन थालेसँगै निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘अब भोलिदेखि नै अनुगमन थाल्दै सार्वजनिक स्थानमा भीडभाड गर्ने र मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तथा कानूनी कार्वाही गरिनेछ ।’ बैठकले सहायक सीडीओको संयोजकत्वमा निषेधाज्ञा अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ । गठन भएको समितिले भोलिदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक क्षेत्रहरुको अनुगमन गर्नेछ । वैशाख १६ देखि जारी निषेधाज्ञा साउन २० गते मध्यरातमा सकिँदैछ । त्यसअघि पुनः काठमाडौं, भक्तपुर र लल
काठमाडौँ । पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा अमेरिका प्रस्थान गरेकी छिन् । श्रृङ्खला हावर्ड विश्वविद्यालयमा सहरी विकास विषयमा स्नातकोत्तर पढ्न अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् । खतिवडाको विदाईको लागी सिसन बानियाँ र परिवारका केही सदस्य विमानस्थल पुगेका थिए । आर्किटेक्चरमा स्नातक गरेकी श्रृंखलाले हावर्ड विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तरका लागि जान लागेको केही समयअघि बताएकी थिइन् । अर्को खबर काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)ले बैंकिङ कसूर मुद्दाका एक फरार प्रतिवादीलाई आज पक्राउ गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन तथा फरार प्रतिवादीको खोजतलासका लागि परिचालित टोलीले बैंकिङ कसूर (चेक बाउन्स) मुद्दामा ललितपुरस्थित पाटन उच्च अदालतबाट कसूरदार ठहर भई फरार रहेका काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ निवासी ठाकुरप्रताप थापालाई पक्राउ गरेको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो ।
दार्चुलापछि विराटनगर जोगवनीमा एसएसबीको अर्काे दादागिरी : दिइएन नाला निर्माण गर्न
विराटनगर । नेपाल–भारत सीमा जोगवनी विराटनगर– १७ इस्लामपुर नेपाली भूमिमा निर्माण गर्न लागिएको नालामा हस्तक्षेप गरेर भारतीय सरक्षाकर्मीले रोक लगाएको छ । भारतीय बजार जोगवनीबाट बगेर आएको पानी वर्षा याममा सो स्थानमा डुबानमा पर्ने खतरा देखिएपछि पानी निकासका लागि निर्माण गर्न लागिएको नाला भारतीय प्रहरी सुरक्षा बल (एसएसबी) को अवरोधका कारण रोकिएको हो । डुबानबाट जोगाउनको लागि नेपालभित्र इस्लामपुरमा पक्कि नाला निर्माण सुरु गर्न नपाउँदै एसएसबीले धाकधम्की दिँदै रोक लगाएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष सो स्थानमा डुवान हुने गरेकाले आफूहरुले त्यस्तो खतरा उत्पन्न नहोस् पानी निकास गर्नका लागि नाला बनाउन लागेको उनीहरु बताउँछन् । ‘दुई सय मिटरको नाला निर्माण गर्न खोज्दा एसएसबीले अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मारङले छलफलपछि यस विषयलाई टुंग्याउने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म केही ख
फेरी किन सबै विद्यालय बन्द गर्न प्रशासनले निर्देशन,हेर्नुहोस्
तनहुँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले सबै विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । कोभिडको जोखिम कायमै रहेको र विद्यालय खोल्ने अनुमति नभए पनि निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आएका थिए । यसबारेमा राससले सोमबार समाचार प्रकाशन गरेको थियो । प्रशासनको समन्वयमा सोमबार बसेको बैठकले सबै विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकमा प्याब्सन, एनप्याब्सन, व्यास नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले सिसिएमसीले निर्णय नगरेसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने बताउनुभयो । “विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रशासनले अनुमति दिएको छैन, कोरोना जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ”, बरालले भन्नुभयो । व्यास नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले विद्यालय खोल्